Gîte Finistère 2 Pers TyCozy Marie4 * Monts D’Arrée
Kwindawo ezolileyo, eneentyatyambo kunye neluhlaza, ibekwe kumbindi weMonts d'Arrée, kwilali eqhelekileyo yaseBreton imizuzu engama-30 ukusuka elwandle.
Kwipropathi enkulu kunye ebiyelweyo, ihlaziywe ngokupheleleyo kwaye yahlelwa 4 *, ijikelezwe kukunyuka intaba, ukukhwela intaba, ukukhwela ihashe kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile entabeni. Imo engqongileyo inyulu, yasendle kwaye igciniwe.
Uya kuba nakho ukufumana lo mhlaba weemfihlakalo kunye neentsomi, uxabise inkcubeko, ifa lemveli, ukuhlukahluka kweendawo zomhlaba phakathi komhlaba nolwandle, i-gastronomy.
Ukudityaniswa nendlu yefama yegranite ye-1661, i-Ty Marie epholileyo yindlu ezimeleyo ye-45 m² enomgangatho, emaphandleni, kwindawo yokuphumla kunye nemithi. Le ndlu indala isandula ukulungiswa inomnyango owahlukileyo wepropathi.
Ukukhathazeka malunga nokuphila kwakho kunye noxolo, siye sanyamekela ukudala umoya ofudumele kunye nokhululekile, kunye nokubonelela ngezixhobo ezitsha, ezikhululekile kunye nezisebenzayo. Umgangatho ophantsi ubandakanya igumbi lokuhlala elinekhitshi elinezixhobo, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala elinesitovu salo somthi, igumbi lokuhlambela elineWC.
Phezulu igumbi lokulala eliqaqambileyo elinekona encinci yokufunda.
Isithuba esivaliweyo nesibucala esingama-40 m², esigrayiweyo, esityalwe ngemithi kwaye sijonge emazantsi nefenitshala yegadi, siya kuba luncedo ekuphumleni nasekuphumleni.
I-20m² engqiyameke-ekutshixekeni yokugcina iibhayisekile, izixhobo zokuhamba intaba, njl.njl. isesandleni sakho.
Indawo yokulala ibekwe kumbindi welali, kwindawo ezolileyo eluhlaza nevaliweyo (i-embankment). Iindlela zokunyuka intaba zidlula kwilali yethu. Ntaba, mlambo, ngokunqwena kwakho. Ekuseni ngenj’ ixukuxa, esitiyeni sethu, ngamanye amaxesha siye sifikelwe yinyamakazi.
Kuyo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso, unganqikazi ukuqhagamshelana nathi ngqo okanye ngekhuriya.